IETT ၏အမျိုးသမီးမောင်းနှင်သူသည်! | RayHaber | raillynews
[09 / 04 / 2020] အသက် ၂၀ မပြည့်သောဥယျာဉ်နှင့်ဥယျာဉ်သို့သွားရန် Autism နှင့် Down Syndrome ရောဂါရှိသူများ	06 တူရကီ
[09 / 04 / 2020] ထုတ်ပယ်ခြင်းကို ၃ လကြာတားမြစ်သည်။ တစ်နေ့လျှင်အခမဲ့ ၃၉.၂၄ TL ပေးဆောင်ရမည်	06 တူရကီ
[09 / 04 / 2020] ၆ Kovid-19 နှင့်ဆက်စပ်သောသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများတွင်အလုပ်လုပ်ရန် Interns အတွက် TL ထောင်နှင့်ချီသောပညာသင်ဆု	06 တူရကီ
[09 / 04 / 2020] Corona Quarantine နှင့်အတူနေရာများအရေအတွက်ကြေညာခဲ့သည်	06 တူရကီ
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်IETT ၏အမျိုးသမီးမောင်းနှင်သူသည်!
21 / 02 / 2020 34 အစ္စတန်ဘူလ်, IETT, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, Institute, ဘီးစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ
IETT မှသုံးလကြာသင်တန်းတက်သောအမျိုးသမီးယာဉ်မောင်း ၉ ဦး သည်ယနေ့အလုပ်စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
ဘတ်စ်ကားပေါ်အမျိုးသမီးမောင်းသူတာ ၀ န်ထမ်းဆောင်ရန် Istanbul Metropolitan Municipality (BBB) ​​သမ္မတ Ekrem amomamoğlu၏ဆုံးဖြတ်ချက်အရ IETT အထွေထွေညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာနပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
စာမေးပွဲများအောင်မြင်ပြီးသောသင်တန်းသူများကိုအောင်မြင်ခဲ့သောအမျိုးသမီးမောင်းသူ ၉ ဦး သည်သင်တန်းပြီးဆုံးပြီးနောက်သင်တန်းစတင်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများသည် Istanbul လူမျိုးများကိုအစေခံရန်ကျေနပ်အားရကြောင်းဖော်ပြပြီးအမျိုးသမီးယာဉ်မောင်းများသည်သူတို့၏အလုပ်ကိုစေ့စေ့စပ်စပ်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
IETT အထွေထွေညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာနကိုအမျိုးသမီးမောင်းသူအမျိုးသမီးများအားသင်တန်းပေးခြင်းတွင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ဘတ်စ်ကားမောင်းခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်မှုဗဟုသုတ၊ ကျွမ်းကျင်မှု၊ သဘောထားနှင့်အပြုအမူများကိုတိုးတက်စေရန်အတွက် ၃ လကြာသီအိုရီနှင့်လက်တွေ့သင်တန်းများပေးခဲ့သည်။
အစီအစဉ်တွင်လျှောက်ထားသူများအတွက်ယာဉ်မောင်းရွေးချယ်ခြင်းသင်တန်း၊ ယာဉ်မြှင့်တင်ရေးသင်တန်း၊ မီးနှင့်အထွေထွေလုံခြုံမှုသင်တန်း၊ Simulator ယာဉ်မောင်းသင်တန်း၊ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးယာဉ်မောင်းသင်တန်း၊ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများလည်းယာဉ်မောင်းအကဲဖြတ်အစီအစဉ်များကိုကျွမ်းကျင်ခဲ့သည်။ သင်တန်းအားလုံးတွင်အောင်မြင်ခဲ့သောအမျိုးသမီးမောင်းသူ ၉ ဦး သည်အစ္စတန်ဘူလ်ရှိလမ်းများပေါ်တွင်ဘီးကိုယူရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။ အမျိုးသမီးယာဉ်မောင်းများတိုးပွားလာရန်လေ့လာမှုများဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည်။
ဖျားနာခြင်းနှင့်အတူ IETT ယာဉ်မောင်းများသည်စတီယာရင်ကိုမဖြတ်နိုင်ပါ
Eskişehirမြို့ပြအလုပ်၏ပထမ ဦး ဆုံးအမျိုးသမီးဘတ်စ်ကားမောင်းသူစတင်ခဲ့သည်
IETT အမျိုးသမီးကုန်သည်ဝယ်သူလျှောက်လွှာတင်ရန်နောက်ဆုံးရက် 15 ကိုအောက်တိုဘာလအထိတိုးချဲ့သည်
ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်နှင့်မှတ်တိုင်များ Tuzla တွင်ပိုးမွှား
Sakarya ရှိအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင် Coronavirus ကိုထိန်းချုပ်သည်
အစ္စတန်ဘူလ်ရှိသတိပေးချက်များကြားမှယာဉ်အသွားအလာယာဉ်အရေအတွက် ၃၅.၈% ကျဆင်းခဲ့သည်
Çiğli Tram စီမံကိန်းကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်တွင်ပါဝင်သည်။ နူးညံ့သော Corona ဖြစ်ပွားပြီးနောက်
Aydın Denizli ကားလမ်းတင်ဒါအားတစ်လရွှေ့ဆိုင်းလိုက်သည်
သမ္မတYavaşမှ ETA, ÖHOနှင့် Dolmuscu Tradesmen သို့ငွေကြေး ၀ င်ငွေထောက်ပံ့မှု
အန်ကာရာတွင်အိမ်မှမထွက်ခွာနိုင်သောအနုပညာချစ်သူများအတွက် 'Virtual Exhibition'
တင်ဒါကြေငြာချက် - İZBANလိုင်းတွင်တင်ဒါများကိုပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်း
14: ဧပြီလ 14 00 @ - 15: 00
တင်ဒါကြေငြာချက် - ဗို့အားအားဖြင့် Aluminotermite ရထားလမ်းဂဟေဆော်ခြင်းလုပ်ငန်း
တင်ဒါကြေငြာချက် - လွမ်းဆွတ်သောရထားနှင့်မြို့ရထားလမ်း ၀ ယ်ခြင်း
15: ဧပြီလ 10 00 @ - 11: 00
ဝယ်ယူရေးသတိပေးချက် - ရထားလမ်းအောက်နှင့် Selet ပလတ်စတစ်အိတ်များကို UIC-60 Scissors များအတွက်ဝယ်ယူခြင်း
16: ဧပြီလ 11 00 @ - 12: 00
Hakkari Merga Butane နှင်းလျှောစီးစင်တာ 130- Bed Bed Hotel ကိုတည်ဆောက်မည်
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာအရာရှိ Sen မှ DHMI နှင့် TCDD ၀ န်ထမ်းများအားငလျင်လှုပ်ခြင်းတောင်းခံရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်